Xiriirka Shataranjiga Oo Ka Qeybgalaya AJCC 2009 | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Xiriirka Shataranjiga Oo Ka Qeybgalaya AJCC 2009
Xiriirka Shataranjiga Oo Ka Qeybgalaya AJCC 2009
Posted On Wednesday, November 25, 2009 By admin. Under wararka
MUQDISHO:Tartan loogu magac daray “2009 African Junior And Girls Chess Championship” ayaa ka dhacaya horaanta sanadka cusub ee 2010-ka, waxaana tartankaasi oo ka qeyb gelayaan kooxaha Shataranjiga dalalka Afrika, iyadoo kooxaha kaalimaha hore u soo baxa ay heli doonaan abaal marinno qaali ah.
Kooxaha ka qeyb gelaya tartanka dalalka Afrika ee ciyaarta Shataranjiga waxaa ka qeyb gelaya wafdi iyo ciyaartoy ka socota Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga, waxaana wafdigaasi oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) iyo laba ciyaartoy oo uu soo xulay Xiriirka.
Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed Axmed Cabdi Xasan Wataac ayaa sheegay inay ka qeyb geli doonaan tartanka Chess-ka ee dalalka Afrika ku yeelanayaan magaalada Qaahira ee dalka Masar, wuxuuna Guddoomiyuhu rajo wanaagsan ka muujiyay in Xiriirkiisu kaalimaha hore ka geli doonto tartankaas.
“Marka ay timaado tartan ciyaarta Shataranjiga ah, Soomaaliya waxay ka ciyaar sareysaa dalal fara badan oo Afrikaan ah” ayuu yiri Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed Axmed Cabdi Xasan.
Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga oo ka qeyb galay tartanno fara badan oo ka dhacay dalalka Afrika iyo Aasiya, ayuu sheegay Guddoomiye Wataac inay guulo taariikhi ah u soo hooyeen dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale waxa uu sheegay in tartanka Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga African Junior Girls Chess Championship 2009 oo ka dhacaya dalka Masar taariikhdu markay tahay 30-ka Disembar 2009-ka wuxuuna dhammaanayaa 8-da Janaayo 2010-ka, iyadoo mudada 9-ka maalmood ah ee uu tartanka uu soconayo.
Sida uu sheegay Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga tartankaasi waxaa ka qeyb gelaya madax ka socota xiriirada iyo ururrada Chess-ka ee dalalka Afrika, iyadoo tartanka sidoo kale ka qeyb qaadanayaan garsoorayaal heer caalami ah.
« Waa sidee dareenka qofka hobbigiisu yahay Ciyaarta Shataranjiga?!!
Aqoon isweydaarsi ku saabsan Shataranjiga oo maanta ka furmay Hotel Naashablood2 »